Rosia : Sigara Natao Ho An’ny Vehivavy Tanora Nahatonga Fifandirana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Septambra 2011 15:54 GMT
Vakio amin'ny teny русский, عربي, polski, 日本語, Español, Italiano, English
Dokambarotra iray vao tsy ela izay sy fonosana navaozin'ilay orinasa mpanao sigara isan'ny matanjaka ao Rosia no nahasosotra ny bilaogera Rosiana ka nahatonga adihevitra teo amin'ny andraikitra ara-barotra sy ny dokambarotra.
Donsky Tabak, iray amin'ireo tena mpamokatra sigara ao Rosia, dia nanavao ny fonon'ny sigarany roa malefaka natao ho an'ny”vehivavy”‘ ary nanao dokambarotra tsara pasoka sy tanora kokoa:
Fanavaozana ilay sigara "sweet Dreams" , sary avy amin'i Dontabak.ru
Sigara mikendry ny tanora?
Ny famoaham-baovao hita tao amin'ny tranonkalan'ilay orinasa [ru] ho an'ilay sigara “vaovao” Nofy Mamy, na Sweet Dreams dia mivaky hoe:
Ny fototra ara-barotra sy ny fanomezana endrika dia ny hevitra fitetezana izao tontolo izao, izay nofinofin'ny tovovavy rehetra. SWEET DREAMS (NOFY MAMY)– dia nofy mamy mikasika tanàna mahafinaritra maro, hahafahanao maka aina, manala azy, ary miantsena mitety mpivarotra.
Tanatinà lahatsoratra iray momba ny dokambarotr'ilay sigara, Adme [ru], tranonkala Rosiana mpanadihady sy mpanakiana dokambarotra, dia nanontany hoe [ru]:
Inona no tsy nofisin'ireo tovovavy tanora, adaladala amin'ireo fiainana asehon'ny fonosan'ilay sigara? fiantsenana, fiara, fitetezana ny tontolo. Na dia ny fahatsiarovan-tena ho bitika eto amin'ity tany ity aza tsy lafo akory – ny zavatra ataonao fotsiny dia ny mandray 20-ruble iray manjelatra (na 0.7 dolara Amerikana) avy ao amin'ny poketranao ary apetraho soa amantsara eo akaikinao. Ary fanampin'izany, misy hanitra ilay sigara ary malefaka ny ‘filtre’ fifohana azy.
Tohin'ilay lahatsoratr'i Adme, Alexey Navalny, bilaogera Rosiana izay fanta-daza dia nampakatra lahatsoratra iray [ru] naneho ilay dokambarotra vaovao sy ny fanamboarana ilay fonon-tsigara taloha sy taorian'ny fahavitany. Navalny sy ireo mpaneho hevitra ihany koa dia nanakiana mafy ilay mpitarika ny Donsky Tabak, Ivan Saviddi, mpandraharaha iray -lasa solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko politika United Russia,(na Rosia Mitambatra), nanao dokambarotra momba ilay sigara ho an'ny tanora sy ny vehivavy.
Miaraka amin'izany, ny vohikalam-baovao Rosiana Vesti dia nitatitra [ru] fa ny Minisitry ny fahasalamana dia eo am-pamolavolana “lalàna henjana mifehy ny fifohana sigara amin'izao,” mandrahona ny tsy hahazoana mifoka sigara intsony any anaty “fiarandalamby, ny seranam-piaramanidina ary ny fiaramanidina goavana fitaterana olona ”, ary koa fampakàrana ny hetra amin'ny sigara , fampakàrana ny vidiny ho 200 rubles (6.9 dolara Amerikana ) isaky ny fonosana.
Ny lahatsoratr'i Navalny dia niteraka onjam-pamerenana mandefa ny lahatsoratra sy fanamarihana maro, na izany fanamelohana ilay dokambarotra, na fanontaniana raha tena mandika lalàna marina tokoa ny fanavaozana ny fonosan'ilay sigara.
Mpaneho hevitra iray no nampakatra lahatsoratra 16 momba ny lalàna ” mikasika ny dokambarotra” navoaka teo aloha[ru] (izay navoaka taty aoriana), izay milazalaza ny hoe ahoana ny vokatra sasany, toy ny alikaola sy sigara, no nomena alalana hanao dokambarotra:
[Mifanohitra amin'ny lalàna ny ] mivarotra mivantana amin'ny zaza tsy ampy taona , ary koa ny mampiasa sarin'olona latsaky ny 35 taona, na ny fanambaràna na ny fandraisana anjaran'ny olona fanta-bahoaka amin'ny ankizy sy ireo latsaky ny 21 taona.
Raha nanamafy i ddkf [ru] fa tsy ilay dokambarotra ihany , fa koa ilay fonosana no mipaka any amin'ny tanora sy ny tanora tovovavy.
Na dia tsy telin'i Donskoy Tabak aza ny dokambarotra momba ireny sigara ireny, ny fonosana mamirapiratra, manintona ny tanora ery dia manaitra foana , ary tsy misy lalàna mandràra izany.
Ao aminà lahatsoratra iray mitovy amin'izay ao amin'ny Gazeta.ru, fotofermer [ru] dia namaly hoe :
Inona no tena olana ? Fomba fandafosana tsotra izany. Seho ivelany mahasarika ary fomba fivarotra fetsifetsy.
Mpitondra fanamarihana iray hafa no niaiky izany [ru] hoe tsy misy olana ny amin'ilay dokambarotra ary nilaza fa hoe ao ambadikin'ny fikiakiaky ny bilaogera ny mpanao politika:
Eo amin'ilay dokambarotra dia toa efa lehibe ilay vehivavy ary misy soratra eo amin'ilay fonosana hoe tsy azo amidy amin'ny latsaky ny 18 taona, tsy haiko hoe avy aiza no nipoiran'ireny zavatra mampihomehy ireny, avy amin'ny hoe maha-mpikambana an'i Donskoy Tabak ao amin'ny United Russia(na Rosia Mitambatra)?
Ao amin'ny vohikala sy ny sehatra fifampiresahana Smoking Girl.ru an'ny ‘ SweetDreams’ na ‘NofyMamy’ dia naneho ny heviny mikasika an'i Donskoy Tabak ireo vehivavy mpifoka, mankasitraka amin'ny ankapobeny.
Sefatli nanoratra [ru] hoe:
Tena mahafinaritra be ilay fonosany – fotsy miaraka aminà sarinà vehivavy sy foto-drafitrasa eto amin'ny tanàna. Efa nisy nanandrana azy ireny ve ?
"Raha voarara izany, nefa tena te-hahazo izany ianao, dia afaka ataonao izany." loharano : Adme.ru
Araka ny hita, mitatitra ny AdMe, fa ny taona 2008, Donskoy Tabak dia tojo olana ara-tibonaly fony izy ireo nanao izay hamoahana dokambarotra iray ahitana vehivavy manao volo sara-droa (rambon-kisoa) mihinana glasy, miaraka amin'ny lohahevitra hoe : “Raha voarara izany, nefa tena te-hahazo izany ianao, dia afaka ataonao izany. “
Navoaka ihany ilay dokambarotra, hoy i AdMe, ary Donsky Tabak dia tsy maintsy nandoa lamandy 100,000 roubles.
Ilay mpitondra fanamarihana, mikesite [ru] dia nanao fandinihana hoe :
Ary dia voasoratra ao mihitsy hoe : “raha voarara izany, nefa tena te-hahazo izany ianao, dia afaka ataonao izany” izay tsy dokanà sigara monja ihany, izany no foto-kevitra, izay ny doherachs velona ho antsika rehetra [fifangaroan'ny teny hoe “oligarch” sy ny “do hera” (“a lot” – ru) manondro ireo ‘Pata be’ Rosiana ].